Akụkọ - NITOYO na ngosi ngosi Canton nke 130 kwụsịrị nke ọma
Mmanụ ụgbọala Pump Assy
Igwe mkpuchi igwe
Pump Ntugharị Ike
Nkwụsị ikuku Strut
Okpueze Wheel Pinion
Ngwa ụgbọ ala
Mpi ụgbọ ala
NITOYO na ngosi 130 nke Canton kwụsịrị nke ọma
ole ka ị maara maka RCEP?
NITOYO IGBO AKWỤKWỌ
Akụkụ akpaaka na-atụ aro na DECEMBER
KA ANYỊ KWESỊRỊ BANYERE NGWAA ELECTRINICAL partment
Ozi ụlọ ọrụ CHINE kacha ọhụrụ
N'ime afọ 130th Canton Fair sitere na 15th ruo 19th Nitoyo sonyeere, anyị nwere ma ihe ngosi n'ịntanetị na nke na-anọghị n'ịntanetị, ma zute ndị enyi ochie anyị na ndị enyi ọhụrụ anyị.
N'ihe ngosi ahụ na-anọghị n'ịntanetị, ndị ọrụ ibe anyị anọ gara Guangzhou nwere ihe nlele nke akụkụ akụrụngwa nke ọ bụla na katalọgụ.Ha bụ ndị na-ahụ maka usoro nnyefe, usoro engine, usoro nkwusioru na usoro eletriki, ha niile nwere ahụmahụ dị ukwuu, nke ọdụdụ n'ime ha nwere ahụmahụ 3 afọ na ụlọ ọrụ ahụ, na maka nduzi nke ihe ngosi a, Jason nwere ọtụtụ ihe ngosi na ngosi. ahụmahụ zuru ụwa ọnụ, n'ihi na ọ nọwo na akpaaka akụkụ mbupụ ruo ọtụtụ afọ ndụmọdụ ọ na-enye banyere ngwaahịa na ahịa bụ nnọọ ọkachamara.
N'ihi na online ngosi, anyị na-ebugo anyị isi ngwaahịa na online ikpo okwu nke Canton Fair na-enwe 4 ndụ mgbasa ozi kwa ụbọchị, ndụ streamers bụ anyị ngwaahịa njikwa na anyị ahịa njikwa, ha nwere ike kọwaara ndị ahịa ma ngwaahịa na ahịa, nye. ị bụ ndụmọdụ ọkachamara kachasị ma nyere gị aka dozie nsogbu ma wepụ obi abụọ.Dị ka isiokwu anyị na-ekwu"ị maara ahịa gị, anyị maara China.Ọ bụrụ na ị na-ekiri anyị ndụ iyi, ị nwere ike doo anya nke ọma banyere Nitoyo, ọ bụghị naanị ngwaahịa, kamakwa ọrụ na uru.Na iyi ndụ anyị ndị na-eme ihe nkiri gosipụtara ụlọ ọrụ anyị n'ụzọ doro anya ma kesaa akụkọ ahụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị ahịa, na-adọrọ mmasị nke ukwuu.ọ bụrụ na ị hụghị nke ọma't ịhụ ndụ iyi, ị nwere ike ịchọ"NITOYO”on YouTube, anyị na-ebugote oge na-akpali mmasị na YouTube, na-atụ anya na-amasị gị.
Tọ 2 sessions nke Canton Fair na 2021 agwụla n'ụzọ zuru okè, anyị nwere nnọọ obi ụtọ imete ọtụtụ ndị enyi.And oyi na-abia, udu mmiri nwere ike idi?Let's mere ọkwa n’oge opupu ihe ubi, na 131thCanton ngosi.
Maka ajụjụ gbasara ngwaahịa anyị ma ọ bụ listi ọnụahịa, biko hapụ email gị anyị ma anyị ga-akpọtụrụ n'ime awa 24.
Ulo ala nke 8, No 2, Tongfu Xiang, Xiyulong Street, Chengdu, Sichuan, PRChina 610015